Tuesday August 27, 2019 - 09:17:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya mandiqadda shaam ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka Yahuudda ay duqeymo ba'an ka geysteen deegaanno katirsan wadamada Suuriya iyo Lubnaan.
Ilo wareedyo dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diyaaradaha Yahuudda ay sedax duqeyn ka geysteen saldhigyo melleteri oo maleeshiyaadka Ururka Xisbullaah ay ku leeyihiin deegaanka Albiqaac ee wadankaasi Lubnaan.
Duqeyntan ayaa timid maalin kadib markii 2 diyaaradood oo nuuca Drone-ka ah yahuudda loogasoo riday Koonfurta magaalada Bayruut ee caasimadda wadanka Lubanaan waxaana jira hanjabaado ay hawada isku marinayaan taageerayaasha Iiraan ee Lubnaan iyo saraakiisha Yahuudda sahyuuniyadda.
dhinaca kale Diyaaradaha dagaalka yahuudda ayaa markale duqeymo khasaara badan dhaliyay ka fuliyay gudaha wadanka ciraaq iyagoo beegsanaya maleeshiyaadka shiicada ah ee sida tooska ah ula shaqeeya dowladda iraan.
Wararka ka imaanaya magaalada alqaa'im ee dhacda xuduud beenaadka ay wadaagaan ciraaq iyo suuriya ayaa sheegaya in shalay gelinkii dambe diyaarad aan duuliye laheyn ay duqeysay gaari nuuca raaxada ah oo ay lasocdeen saraakiil katirsan maleeshiyaadka xashdiga loo yaqaan.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 sarkaal oo shiico ah ay ku dhinteen duqeynta waxaana burburay gaarigii ay la socdeen, degmada alqaa'imd waxay katirsantahay gobolka al-anbaar ee dhaca galbeedka wadanka ciraaq waxaana gacanta ku haya maleeshiyaad ay iiraan hubeyse.
duqeyn kale oo diyaarado ajnabi ah ka geysteen saldhig melleetri oo kuyaal xuduuda ay wadaagaan iiraan iyo ciraaq aya sababtay in laburburiyay tobanaan bakhaar oo uu hub ugu keydsanayaa maleeshiyaadka xashdiga loo yaqaan.